December 2012 ~ HIDE N SEEK
वि.सं २०५८ ताका महोत्तरीकी मरणीदेवी साहलाई बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी भकुरियो । जबर्जस्ती मलमूत्र ख्वाउने, जिउँदै जलाउने, मुखमा एसिड हुत्याइदिनेजस्ता आततायी घटनाहरु यो मुलुकमा २०५८ सालयता मात्रै हुन शुरु गरेका होइनन् । तर अघिका त्यस्ता घटिया घटनाहरुलाई कुनै खास घटना होइन, एउटा स्वाभाविक नियति मानिन्थ्यो । गाउँको कुनै ठूलोठालुका आँखामा कोही आईमाई बिझायो भने बोक्सीको बात लगाइदियो...टन्टा खलास् । ठालूले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो, सारा गाउँ जुरुक्क उचालिएर त्यो बिचरीलाई तातै निल्न आउँथ्यो । ती निरीह प्राणी भावीले छैंठीमा आफ्नो ललाटमा यस्तै कोरिदिएको सोच्दै बोक्सीको उपमा चुपचाप सकारिदिन्थिन् । तर पछिल्लो दशकमा भएको आमसंचार र जनचेतनाको विकासले बोक्सीका नाममा मध्ययुगीन अत्याचार गर्ने अधिकारबाट ठालूहरुलाई अलिकति भएपनि वञ्चित गरिदिएको छ । मरणीदेवीको केस मिडियामा आयो, जागरुक नागरिकहरु त्यसविरुद्ध आँधी भएर उठे र ढिलै भएपनि सही, उनलाई बोक्सी भन्नेहरु हच्किए । ती अदालतका फन्दामा परे । मरणीदेवी काठमाडौं खाल्डो आइन्, नारी वेदना र नारी संघर्षको प्रतिरुप बनिन् र पारिजात संघर्षशील पुरस्कारबाट सम्मानित भइन् ।
त्यसयता एउटा सिंगो दशक गुज्रिसक्यो । तर महिला हिंसाका सर्वथा नयाँ कलेवरमा नयाँ नयाँ मरणीदेवीहरु जन्मन रोकिएका छैनन् । हामीले मरणीदेवीलाई सम्मान गरेर नारी हिंसाका ती अँध्यारा पाटाहरुबाट बाहिर निस्क्यौं भनेको त झनै डरलाग्दा रुपरंगका अन्याय अत्याचारमा पो लिप्त हुँदैगएछौं । शिक्षाको विकासले पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको जगमा रहेको नारीप्रतिको अनूदार दृष्टिकोण बदल्यौं भनेको त झनै जरा गाड्दै पो रहेछौं । शिक्षित हुँदैमा मानिस विवेकी हुँदोरहेनछ । होइन भने, प्रहरी जवान सुन्तली धामी आफ्नै अफिसरहरुबाट दिनदहाडै प्रहरी कार्यलयमै त्यसरी पाशविक रुपमा बलात्कृत हुनुनपर्ने हो । मैना सुनुवारलाई सेनाले त्यस्तो बर्बर ढंगले यातना दिईदिई, तड्पाईतड्पाई, चरम यौन शोषण गर्दै नमार्नुपर्ने हो । मानवतालाई नै कलंकित पार्ने सोच्नैनसकिने घटनाहरु धमाधम घटेकोघट्यै नहुनुपर्ने हो । यो सबका पछाडिको जड कारणमा हाम्रो सामूहिक सोचाईपद्धति छ, जुन हाम्रै समाजले हामीलाई दिएको स्कुलिंगको उपज हो ।
नारी हामी सबैकी जननी हुन्, उनको पूजा गर्नुपर्छ भनेर मुखले जति फलाकेपनि व्यवहारतः हरेकले घरघरमा लैंगिक भेदभावको चित्र बच्चैदेखि पहिल्याउन थाल्छन् । सकीनसकी छोरोलाई बोर्डिंग भर्ना गरिदिने बाउआमाले 'अर्काको घर जाने जात' की छोरीलाई सानैदेखि घरगृहस्थी स्याहार्न सिकाउँछन् । एउटै कोखबाट जन्मेको एउटा आँगनमा मदमत्त खेल्दै हुन्छ, अर्की विचरी कि त भाइ खेलाउँदै होली, कि भने घरधन्दा गर्दै । भाइले केही विराम गर्दा पुल्पुल्याइ पाउँछ, उसले पाउँछे गाली । ‘तँ नकच्चरीलाई गाउँगाउँ डुल्दै हिंड्नुपर्छ ? लाजसरम केही नभाकी’- आमाको टोकाइले ऊ लाज के हो थाहा नपाउँदै आफ्नो लाजको रक्षार्थ जेहाद छेड्दै हिंड्नुपर्छ । विवाह के चीज हो अथ्र्याउनसक्ने नहुँदै दुलाहा छिनोफानो भइसक्छ । अथाहा औडाहा हुन्छ हुर्केकी छोरी घरमा हुने बाउआमाका मनमा । अलिकति बुझ्ने हुँदैगर्दा भाइले थाहा पाइसक्छ- दिदीभन्दा त म ठूलो हुँ, घरमूली मै हुँ, घरको जेठोबाठो मै हुँ, शेषपछिको खाने मै हुँ । संस्कार दिंदा ठूलाबडाको सम्मान गर्नुपर्छ, छोरा- भनिन्छ तर नारीको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर कहींकतै सिकाइँदैन । फलतः उसमा पुरुष अहं चढ्छ, नारीप्रति सम्मानभाव चढ्दैन । सहरबजारमा पनि मात्रा फरक होला, तर समस्याको चूरो त्यही नै हो । यो बराबरी व्यवहार गर्ननसक्नु बाउआमाको दोष होइन, हाम्रो सामाजिक-आर्थिक संरचनाको निर्माण भुइँतहदेखि उपरीतहसम्म नै त्यसहिसाबले भएको छ ।
पतिको जुठोपूरो र गोडा धोएको पानी पिउनुपर्ने नियम बसाल्ने समाजमा नारी स्वाभिमान कहिल्यै उँचो हुनसक्दैन । लोग्नेको खुट्टा मिच्दै अनि सासूका वचनवाण सहँदै बुहारी-जीवन गुजार्नुपर्ने गाउँहरुले नारीजातिलाई सधैं दबदबामै रहेको देख्न चाहन्छन् । मानौं नारी कुनै प्राणी होइन, भोग गर्ने मेसिन हो । रंकदेखि राजासम्मैको रीत यही हो । कोही सुन्दर तरुणी देख्नैनहुने, देख्यो कि त भोग्या बनाएर दरबार छिराइहाल्ने रणबहादुरको पालाका किस्साहरु जगदीश घिमिरेकृत ‘सकस’ मा पढ्दा निस्सासिएको थिएँ । बाहिर सज्जन र भलाद्मीको मास्क भिर्नेहरु नै भित्रभित्र कतिसम्म दुर्जन हुन्छन, सबैले देखेभोगेकै कुरा हो । महिलाअधिकारको साइनबोर्ड राखेर पसल खोलेकाहरु नै महिला हिंसाको साझेदार रहेका घटनाहरु नसुनिएका होइनन् ।
यो लेख्दैगर्दा दिल्ली अझैं आन्दोलित छ । दुई साता पहिले एक २३ वर्षीय किशोरीमाथि भएको जघन्य अपराधको विरोधमा सारा भारत स्वतःस्फूर्त रुपमा उठेको छ । वास्तवमा, सामूहिक बलात्कारमात्रै किमार्थ थिएन त्यो । बलात्कारले नमेटिएको प्यास मेटाउन आततायीहरुले फलामे रड घुसाए योनीभित्र । आन्द्रासम्म त्यसको असर पुग्यो र आखिर त्यो अपरेशन गरेर काटी फाल्नुपर्यो । दामिनी, निर्भय र अमानतजस्ता नामबाट पुकार्दैछन् मान्छेहरु उनलाई, जो अहिले जीवन र मरणको दोंसाधमा सफ्दरजंग अस्पतालबाट सिंगापुर लगिएकी छिन् [अपडेटः उनले भर्खरै जीवनसँगको संघर्ष हारिन् तर उनको मृत्युले उठाएका मुद्धाहरुले यी वीरांगनालाई अमर बनाएको छ ।] धेरै भन्दैछन्- ती नरपिशाचहरुलाई क्यास्ट्रेट गर्नुपर्छ, झुण्ड्याउनुपर्छ । हो, कडाभन्दा कडा सजाय दिएर एउटा नजिर बसाल्नैपर्छ, ताकि आइन्दा यस्तो गर्नुअघि हरेक मान्छेले दशपटक सोच्नुपरोस् । तर दण्ड र विधिविधानमा मात्रै अल्झिएर बस्नुभन्दा हाम्रो सामाजिक प्रणालीमा नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको गम्भीर खोट सच्याउनेतर्फ पनि कम्मर कस्नुपर्ने हो । रेप क्यापिटल कहलिन थालेको दिल्लीले यसपटक अभूतपूर्व प्रतिरोध गर्यो, सायद घटनाको अतिशय गम्भीरताले पनि होला । यता हाम्रोमा लगभग दिनदिनैजसो बलात्कार र जिउँदै जलाइएका घटनाहरु बाहिर आउँदा पनि आक्कलझुक्कल धर्नाबाहेक कुनै प्रतिरोध हुननसक्नु दुखलाग्दो कुरा हो । बर्दियाकी १६ वर्षीय शिवा हसमी आफूसँग भाग्न नमानेको निहूँमा एउटा नरपिशाचबाट जिउँदै जलिन् र उपचारका क्रममा स्वर्गे भइन् । त्यति ग्ल्यामरस थिएन सायद यो विषय मिडियाबाजीका निम्ति, घटना त्यत्तिकै थामथुम भो । पिडकहरु थप हौसिए र अस्ति मात्रै बाराकी बिन्दूकुमारी ठाकुरको नियति पनि शिवाकै जस्तोगरी अन्त्य भयो । मान्छेहरु सोध्दैछन्- खै कहाँ हरायो मानवता ? कता हरायो, सायद कसैलाई थाहा छैन । तर यसैगरि मान्छेहरु यस्ता बर्बर उन्मादहरुप्रति आँखा चिम्लदै जाने हो भने, निश्चित छ- हराएको यो मानवता कहिल्यै भेट्टिनेछैन ।
हातमुख जोर्नैका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरुका आफ्नै कहर छन् । खाडी मुलुकहरु महिलाप्रति झनै कट्टर छन् र बुझ्ने कुरा हो- जहाँ कट्टरता हुन्छ, त्यहाँ नारी अस्मिता झनै खतरामा हुन्छ । तर अहिलेलाई त्यो पाटो बिर्सिदिउँ । यहाँ त बरु उताबाट सकुशलै फर्किएला, आफ्नै देशको सिमाना टेकेपछि चाहिं के हुने हो भन्ने भय देखियो । हाम्रो एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागद्धारा महिनादिनअघि भोजपुरकी एक महिला खाइनखाई कत्रो दुखजेलो गरी कमाएर ल्याएको पैसासहित सर्वस्व लुटिएको समाचार आउनु के राष्ट्रिय लज्जाको विषय होइन ? त्यसमाथि एक महिनापछि मात्रै घटना बाहिर आउनु थप लज्जास्पद कुरा हो । आखिर बलात्कार गर्ने पुरुषको कुनै इज्जत नजाने तर बलात्कृत नारी चाहिं जीवनैभरि घोसेमुन्टो लाउँदै अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने समाजमा कति यस्ता घटनाहरु कार्पेटमुनि लुकाइएका होलान्, कसलाई फुर्सद अन्दाज लगाउन ? सरकारकै पुलिस र कर्मचारीहरुको मिलीभगतमा यस्ता घटना हुनथालेपछि प्रश्न उब्जिएको छ- अब कहाँ छन् सुरक्षित चेलीबेटीहरु ? के आफ्नो जीउको रक्षा गर्नैका निम्ति बन्दूक बोकेर हिंड्नुपर्ने समय आएको हो ?
दाइजोका नाममा हुने महिला हिंसा त्यत्तिकै पीडादायी छन्, बम्बईका दलालबाट बेचिने चेलीहरुका कथा उस्तै दर्दनाक छन् र छन् उत्तिकै हृदयविदारक महिनावारीका बेला दशबाह्र दिन गोठको बास झेल्नुपर्ने सुदुरपश्चिमेली महिलाका छाउपडी व्यथाहरु । नेपाली नारीहरुको यो अग्निपरीक्षा आखिर कहिलेसम्म हो ? शिक्षा, चेतना र संचारको द्रुत विकास भएको यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कसरी दिल्लीको वा बाराको जस्तो पाशविक र अमानवीय घटनाहरु भइरहेका छन् ? केबल भोग गर्ने शरीरका रुपमा मात्रै नारीलाई हेर्ने सनातनकालदेखिकै लेन्समा किन परिवर्तन हुनसकेको छैन ? मुखमा ‘यत्र नायस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ र बगलीमा छुराको व्यवहार किन दोहोरिरहेको छ ? समाजसामु तेर्सिएका यी गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न र तदनुरुपको बाटोमा समाजलाई हिंडाउन जति ढिला हुँदै गर्छ, नयाँनयाँ कलेवरमा नयाँ नयाँ मरणीदेवीहरु, नयाँ नयाँ दामिनीहरु क्रूरताका सबैखाले पराकाष्टाहरु नाघ्दै यो समाजले जन्माइरहने पक्का छ ।
at 12/28/20120comments Labels: Commentary
at 12/06/20120comments Labels: व्यक्तिचित्र
भताभुंग राजनीतिका कारण चारैतिर विरक्तिमात्रै छाएका बेला पुष्पा बस्नेतले सीएनएन हिरोको उपाधि जितेको सम्बन्धी समाचार पढ्न पाउनु गौरवको विषय हो । विविध कारणवश कारागारमा परेका आफ्ना बाबु वा आमासँगै जेलको कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य पारिएका निरापराध केटाकेटीहरुलाई त्यहाँबाट निकालेर सहारा र माया दिदैं हुर्काउनेबढाउने पुष्पाको कामको जति नै तारिफ गरेपनि कमै हुन्छ । सधैं नकारात्मक खबरहरु सुन्न अभ्यस्त हाम्रालागि देशमा केही पनि राम्रा कामहरु भएकै छैनन् भन्ने लाग्छ तर धिमा गतिमै सही, यहाँ थुप्रै नेपालीहरु छन् जो चुपचाप आ-आफ्नो कर्मक्षेत्रमा निस्वार्थ तवरले दत्तचित्त भई खटिरहेका छन् । यसअघि पनि मानव बेचबिखनका विरुद्ध क्रियाशील अनुराधा कोइरालाले सोही उपाधि पाउँदा अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शीर ठडिएको थियो । अहिले पनि अर्की चेलीले नेपालको नाम चम्काउँदैगर्दा भन्न मन लागेको छ -गतिला मान्छेहरु पनि प्रशस्तै छन् यो देशमा । जतिखेरसुकै राजनीतिलाई सत्तोसराप गरेर ‘यो देशमा कहिल्यै केही हुनेवाला छैन’ भनेर बम्कनुभन्दा आफ्नो क्षेत्रबाट जेजति सकिन्छ, इमान्दारीपूर्ण ढंगले गर्ने हो भने ‘गरेर के हुँदैन र’ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण बनेकी छिन् पुष्पा ।
आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाबकिताब नगरी अप्ठ्यारामा परेकाहरुको सेवामा जुट्नुजत्तिको पुण्य अरु केही छैन । पुष्पाले यही पुण्य कमाइन् । मात्र २१ वर्षकै खाउँखाउँ लाउँलाउँको उमेरमा उनले समाजसेवाको यो पवित्र क्षेत्रमा हामफालिन् । उनको जस्तो असाधारण निष्ठा, त्याग र लगन हामीजस्ता साधारण मनुवाहरुमा भेट्न गाह्रै होला, तैपनि जुन ढंगबाट संभव हुन्छ, आफू थोरै रित्तिएर अभावमा पिल्सिएकाहरुको भाँडो भरिदिन हामी तम्तयार हुनैपर्छ । ऐयासी जीवन जिउनसक्ने हैसियत भएको पारिवारिक पृष्टभूमिबाट आएका अनुराधा कोइराला वा पुष्पा बस्नेतहरु त्यसप्रकारको मोजमस्ती त्यागेर बिचल्लीमा परेका दीनदुखी मानिसहरुको सेवामा होमिन आइपुग्छन् भने हामी पनि आफूले सकेजति अरुको सेवामा आफूलाई पोख्न किन नसक्ने ? खाँचो छ त केबल इच्छाशक्तिको ।
सीएनएन हिरोका रुपमा उनले पाएको प्रसिद्धिले उनको कामको संसारैभरि प्रचार मात्रै भएको छैन, उनको बाटो पछ्याउन चाहनेहरुलाई पनि पुठ मिलेको छ । पुरस्कारस्वरुप उनले पाएको ठूलो रकमले उनको काममा पनि थप टेवा पुग्नेछ । अरु धेरै नानीहरु जेलको अन्धकारबाट पुष्पा मामुको उज्यालो छहारीमा भविष्य कोर्न आउनेछन् । यस मानेमा हामी सबै नेपालीहरु, जसजसले भोट गरेर पुष्पा मामुलाई सीएनएन हिरोको उपाधि चुम्न सघायौं, पनि बधाईका पात्र बनेका छौं । यो खुशीको पलमा यत्ति कामना गरौं- पुष्पा मामुको सेवाभाव टाढाटाढासम्म फैलिरहोस् ।
at 12/04/20120comments Labels: व्यक्तिचित्र